Khaladaadka of Crypto Investors. Error 3 - Blockchain News
Dayaca tallaabooyin ammaanka
Maalgalinta cryptocurrencies waxa uu la xidhiidhaa khatarta sare, ay ka mid yihiin sabab u ah joogitaanka suuqa of tiro badan oo scammers isticmaala qaabab kala duwan oo weerarro si ay u helaan crypto-kaydka ee maalgashadayaasha. Sidaas, sida ay aqoonsiga cryptotrader ee Peter McCormack, weerar on Crypto boorsada waxaa ka go'an maalin kasta. is-weydaarsiga ayaa sidoo kale waxaa waajib ah in jeegag joogto ah xoog.
haystaha kasta oo cryptocurrency ah waa in ay ogaadaan khataraha ka iman kara iyo inay xajiyaan oo tallaabooyin taxaddar ah oo dhan marka la cryptocurrencies shaqeeya:
– Dooro habka of kaydinta cryptocurrency: waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo boorsada qabow oo ay leeyihiin iyaga taageeray;
– Isticmaal sugida laba-factor ee user
– Ku rakib barnaamij anti-virus lagu kalsoon yahay
– Marna bandhigno muhiimka ah ee gaarka loo leeyahay oo aad
– Had iyo jeer hubi cinwaanada boorsooyinka iyo links
– Waxay leeyihiin nidaam lagu kalsoonaan karo ee sirta ah iyo-weedho fadhiisan
Waxa kale oo xusid mudan ilaalinta sirta iyo SID-weedho meel amaan ah, haddii kale waxay u badan tahay inuu ku soo celiyo qaddar ee Mark Frauenfelder, kuwaas oo ku 2017 ku dhawaad ​​laga badiyay bitcoins uu muddo ka badan $ 32,000. Oo dadkii oo dhammu, waayo, xaashi uu lumay la password ka mid ah 24 erayo ka jeebka qabow. Ogaaday in uu jiray ma uu xusuusan kartaa PIN-code in ay jeebka ku, uu yaabi by xaqiijinta in uusan ka heli kartaa cryptocurrencies uu sinaba.
Frauenfelder ka codsaday in ay taageero farsamo oo ka mid ah kii jeebka crypto, qoray on forums, raadisay siyaabo in isaga khawano iyo xitaa soo jeestay in ay ku takhasusay hypnosis a, laakiin waxaas oo dhan ma keeno natiijo la doonayo.
Sidaas darteed, ayaa loo caawiyey by Hackers dhalinyaro ah, oo qoray edbinta ku saabsan sida loo crack software ah in ay jeebka qabow. Si kastaba ha ahaatee, waxaa isaga ku kici bilood badan oo stress, lacag iyo komishanka inay Hackers ee soo kabsanaya ka password iyo SID-weedha.
Khaladaadka of Crypto Investors. Error 2 Khaladaadka of Crypto Investors. Error 4
New warqad cilmi baadhis s ...
SEC dib Seeraar E ...
Post Previous:Khaladaadka of Crypto Investors. Error 2
Post Next:Ethereum Foundation dhawaaqay qaata oo ka mid ah “ruxruxo ugu horreeya ee deeqaha” of $ 2.5 million